Shiinaha Customized Vertical fur-in 2U warshad jiifku warshad, warshad - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Na soo wac +86 13425051878
Noogu soo dir Emailka jason@goldenor.net
4U jiifka warshadaha
2U jiifka warshadaha
4U jiifka server
3U jiifka server
2U jiifka server
1U jiifka server
Hoyga > Gawaarida warshadaha > 2U jiifka warshadaha > VUuterik fur-in 2U jiifku warshadaha
VUuterik fur-in 2U jiifku warshadaha
3.5 inch HDD saxaarad
4U 24HDD shaashadda serverka
4U 20HDD jiifka server
Waxyaabaha: 1.0mm qaro weyn oo xoog badan oo bir ah (SGCC);
midabka: Qaybta hore waxaa lagu dubay budo madow, jirka jiifkana lama rinjiyeynin;
Qaybaha Extension: 1.1 * 3.5 "HDD qaybta waxay taageertaa 3 3.5" HDD. 2.1 * 2.5 "qaybta HDD waxay taageertaa 4 2,5" HDDs.3.1 * ODD raka magnetic, taageer 1 * 5.25â € ³CD ROM, 1 3.5â € ³HDD ama 8 2.5â ³ ³HDD
Goldenor Elektaroonigga Teknolojiyada Co., Ltd.
1.0mm bir adag oo xoog badan oo xoog leh (SGCC);
Qaybta hore waxaa lagu dubay budo madow, jirka jiifkana lama rinjiyeynin;
1.1 * 3.5 "Qalabka HDD wuxuu taageeraa 3 3,5" HDD.
Qalabka 2.1 * 2.5 "HDD wuxuu taageeraa 4 2,5" HDD.
3.1 * ODD sagxad magnetic, taageer 1 * 5.25â € €CD ROM, 1 3.5â € €HDD ama 8 2.5â € ³HDD
Qaybta dambe waxay taageertaa hal taageere 8025, mid 6025 taageere oo ku yaal 2.5 "HDD bracket, iyo hal 6025 taageere 3.5" HDD bracket si loo hubiyo shuruudaha kala-baxa kuleylka;
Taageer 12 "x1.5" iyo hooyooyin xajmi ahaan ka hooseeya;
Taageer ilaa 3 kaar oo caadi ah oo siman / 7 kaar oo toosan iyo nus ah;
Heerka 2 USB 2.0;
1 badhanka badhanka korontada / 1 badhanka badhanka dib udajinta;
Tilmaamaha Awoodda /adagwadidtilmaame / 2 * tilmaame xiriiriyaha shabakad;
Taageeri karaa PS / 2,
Heerkulka shaqada: 0â „ƒ-40â„ ƒ
Heerkulka keydinta -10â „ƒ-70â„ ƒ
L (509) * W (430) * H (88) mm, oo aan dhererkiisu haynin.
1. USB-ga hore 3.0 * 1 + 2.0 * 1 â - ¡
2. USB-ga hore 3.0 * 2 â – ¡
3. 80 * 80 * T25MM taageere, xawaaraha 2900, 4PIN â – –
4. 60 * 60 * T25MM marawaxad, xawaare 3600, 4PIN â ¡
5. Xadiidka tareenka - –¡
Calaamadaha kulul: Vertical fur-in 2U jiifku warshadaha, Shiinaha, Customized, xigashada, Warshad, Tayada
Jaan-goynta fur-in 2U jiif warshadaha
Xalka maalgashiga eber ee adeega2021/01/18
Hordhac: Xaqiijinta kaydinta xogta uma baahna maalgelin raasumaal ah. Marka muhiimada xogta aysan sareynin, nidaamku wuu fududahay, loomana baahna otomaatig iyo badbaadin waqti dheer ah, waxaa suurtagal ah in loo isticmaalo kheyraadka jira si loo dhiso nidaamka keydinta xogta iyada oo aan la helin w......
Warbixinta cilmi baarista waxay sheeganeysaa in silsiladda warshadaha gudaha ee Shiinaha si tartiib tartiib ah loo aasaasayo2021/01/18
Hay'ad cilmi baaris oo hoos timaada Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Teknolojiyada ee Shiinaha ayaa soo saartay warqad cad 3-dii. Waxay tilmaamtay in iyadoo la kaashanayo tiknoolajiyadda furan ee OpenPOWER, ay si tartiib tartiib ah uga samaysay la'aanta tiknoolajiyad muhiim ah oo loogu talaga......
Maxay tahay in adeegaha loo dhigo qolka kumbuyuutarka?2021/01/18
Haddii degelku si caafimaad leh u kori karo iyo haddii kaleba, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la doorto booska adeegga ku habboon, taas oo sidoo kale ah mawduuc caan ka ah warshadaha. Halkan waxaa ku yaal sharaxaad kooban oo ku saabsan dhinacyada loo baahan yahay in la tixgeliyo markii la dooranayo......
Aaway geeska dhintey ee dayactirka jiifka serverka2021/01/18
Qalabka adeegga waa nooc ka mid ah mashiinnada iyo qalabka "qaaliga ah". Guud ahaan, waa in si joogto ah loo booriyaa oo loo ilaaliyaa si mashiinku si fiican ugu shaqeyn karo. Xaqiiqdii, inta badan waan iska indhatirnaa meelaha qaarkood inta lagu jiro dayactirka, markaa maxay yihiin dhammaadka dhimi......
U soo dir su'aalo: Su'aalaha ku saabsan wax soo saarkayaga ama pricelist, fadlan noo dhaaf emaylkaaga oo waxaan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
NO.39ï¼Œ Wadada Guichang, Hongmen lndustrial Zone, Chang shangtou Village, Qingxi Town, Dongguan City